မထင်မှတ်ထားလောက်အောင် ကြည့်ရှု့သူတွေ အံ့အားသင့် လောက်အောင် အထာ ကျကျ လှုပ်ခါပြီ ကပြထား တဲ့ နန်းခင်ဇေယျာ ရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယို…. – Shwe Naung
မထင်မှတ်ထားလောက်အောင် ကြည့်ရှု့သူတွေ အံ့အားသင့် လောက်အောင် အထာ ကျကျ လှုပ်ခါပြီ ကပြထား တဲ့ နန်းခင်ဇေယျာ ရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယို….
N N | August 17, 2021 | Celebrity | No Comments
ချစ်ပရီသတ်ကြီးရေ ဒီတစ်ခေါက်မှာ တော့ လှပတဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ စွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးတွေ ကိုပိုင်ဆိုင် ထား တဲ့ ပရိသတ် အချစ်တော် နန်းခင်ဇေယျာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မော်ဒယ်လ် လောက ကနေ အနုပညာ လောကထဲကို ရောက်ရှိ လာပြီး ယခုအချိန်မှာ တော့ အနုပညာ အလုပ်တွေကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေကာ
အနုပညာ လမ်းကို ဆက်လက် လျှောက်လှမ်း နေတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မော်ဒယ်လ်လောက ထဲစစရောက်ခါစ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရဲ့ ရှု့ချပြောဆိုချင်းကို ခံခဲ့ရသော်လည်း အားမလျော့ပဲ ကြိုးစားမှုတွေကြောင့် 2012 ခုနှစ်မှာ အလှမယ် သရဖူကို ရရှိ ခဲ့ ပြီး သူမ ဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့ စတင်ခဲ့တာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ယခုအချိန်မှာ လည်း ကြော်ငြာ များစွာကို လက်ခံ ရိုက်ကူး နေရကာ အနုပညာ အလုပ်တွေ နဲ့ အဆက် အသွယ် မပျက်ရှိနေတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။နန်းခင် တစ်ယောက် ဟာ မော်ဒယ်လ် သရုပ်ဆောင် အလုပ် အပြင် ဂီတ ဘက်မှာ လည်း သီချင်းတွေ ကိုပါ သီဆို ပါသေးတယ်။
လတ်တလော မှာလည်း မာလာရှမ်းကို ရောင်းချတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်ဆောင် နေကာ ဘဝကို ရိုးသားစွာ အလုပ် လုပ်ကိုင်ပြီး ဖြတ်သန်း နေတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အားလပ်ရက် တွေမှာလည်း GYM သွားကာ အားကစား လုပ်နေပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကို လှပအောင် ပြုမူနေ ထိုင်နေတဲ့ သူလေး တစ်ဦး ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ယခုအခါမှာတော့ သူမရဲ့ အမိုက်စား TikTok ဗီဒီယိုလေး တစ်ပုဒ် ကို ချပြလာတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဆက်စီ ကျကျ ပွတ်သတ်ပြီး မြင်သူတိုင်း အံ့အားသင့် သွားအောင် ဆော့ ကစားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ဗီဒီယိုလေး ထဲမှာ နန်းခင်ဇေယျာ တစ်ယောက် စွဲဆောင်မှု ရှိနေပြီး အရမ်းကို မိမိုက်နေတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ကလည်း ဂစ်တာ ရှိုက်လေးလို လှနေတာ ကြောင့် ကြည့်မိ သူတိုင်း ရင်ခုန်စေ မှာတော့ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ….ပရိသတ်ကြီးတို့ အတွက် နန်းခင်ဇေယျာ ရဲ့ အမိုက်စား TikTok ဗီဒီယိုလေးကို ပြန်လည် ကူးယူ ဖော်ပြပေး လိုက်တာ ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်….။